Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Pịa ebe a ma ọ bụrụ na nke a bụ ntọhapụ mgbasa ozi gị! » Ọgwụgwọ Carbon ion ugbu a dị maka ndị ọrịa kansa China
Usoro ọgwụgwọ carbon ion bụ usoro ọgwụgwọ radieshon dị elu nke nwere ike ịdị irè maka etuto dị mgbagwoju anya nke siri ike iji usoro ọdịnala gwọọ ya. Ahịa maka ọgwụgwọ carbon ion na-enweta ume na China nwere ọtụtụ akụrụngwa ma a na-ewu ya, ma ọ bụ n'oge nhazi.
RaySearch Laboratories AB (publ) kwuputara nnukwu usoro maka usoro nhazi ọgwụgwọ RayStation site na Lanzhou Ion Therapy Co, Ltd., onye China na-emepụta ngwa ngwa maka usoro ọgwụgwọ carbon ion.
Lanzhou Ion Therapy Co, LTD (LANITH), nke dị na obodo Lanzhou, ọkachamara na mmepe na ntinye nke ngwaọrụ ahụike site na iji ion carbon na ion ndị ọzọ dị arọ. LANITH ahọrọla RayStation ugbu a iji hụ na usoro izizi kachasị na arụmọrụ na-arụ ọrụ.
Usoro a gụnyere ikikere RayStation maka akụrụngwa ọgwụgwọ carbon ion ọhụrụ atọ na China. Nrụnye RayStation zuru ezu gụnyere modul maka nyocha pensụl carbon ion na maka atụmatụ ọgwụgwọ foton.
Ngụkọta ọnụ ahịa n'usoro ruru MEUR 5.6 (ihe dị ka MSEK 56), gụnyere nkwekọrịta ọrụ afọ ise, na mmezu nke usoro a dabere na mkpochapụ ahịa NMPA.